Shanta kulan ee dhismaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android | Androidsis
Waxaa jira noocyo badan oo ciyaaro ah oo loo heli karo Android. Taas macnaheedu waa in ficil ahaan dhammaan isticmaaleyaasha aaladaha Android ay ka heli karaan ciyaar ay jecel yihiin. Suugaan jirtay muddo dheer oo caan ku ah dadka isticmaala, waa ciyaaraha dhismaha. Cayaaraha ay tahay in aan dhisano magaaladeena.
Waqtigan xaadirka ah waxaan ka heli karnaa qaar badan oo ka mid ah ciyaarahan oo laga heli karo Play Store. Laga soo bilaabo waxa ay umuuqato isticmaaleyaal badan xulashadu way adagtahay. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan xulasho ku sameynay cayaaraha ugu wanaagsan ee Android. Ciyaar noocee ah ayaa liistada sameysay?
Ciyaaraha badankood ee liiskan waxaa lagu yaqaan isticmaalayaasha. Marka layaabi meyso inaad qaar ogaatid. Laakiin, dhammaantood waa kuwa ugu xiisaha badan ee aan ka heli karno qaybtaan cayaaraha dhismaha.
3 Magaalada City Island 4 Sim Town Village
4 Westbound: Cowboys Khatar Ranch!
5 2020: Dalkeyga
Mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan uguna caansan Android. Waxay leedahay downloads ay hore u dhaaftay 10 milyan. Markaa shaki la'aan waa ikhtiyaar aad u caan ah dadka isticmaala. Ciyaarta waan awoodi doonaa in aan abuurno magaaladeena isla markaana aan horumarinno kaabayaal muhiim ah la mid ah garoomada diyaaradaha ama saldhigyada. Waxaan sidoo kale daryeeli doonaa dhaqaalahaaga. Marka waa inaan helnaa magaaladu si wanaagsan ayey u socotaa oo u koraan mar walba.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kastoo gudaha gudaheeda aan ka helno wax iibsasho.
Megapolis Dhis magaalada aad ku riyoonayso!
Developer: Bulshada Quantum Ltd.
Ciyaaraha SimCity waxaa laga yaqaan adduunka oo dhan. Labadaba qalabka Android iyo kombiyuutarada. Iyagu waa cayaaraha ugu caansan ee dhismaha magaalada ee aan heli karno. In kasta oo ay bilaabayaan noocyo cusub. Hawlgalku wax badan iskama beddelin marka loo eego keenista kale. Waa inaan abuurnaa magaaladeena oo aan u noqonaa duqa magaalada. Marka waa inaan hubinno inay wax walba si hagaagsan u socdaan, inay nabdoon tahay oo dadku faraxsan yihiin.
Soo degsashada ciyaartan dhismaha ee loogu talagalay Android waa bilaash. In kastoo gudaha gudaheeda aan ka helno wax iibsi iyo xayeysiis.
Developer: ARTS ELEKTRONIC ARTS
Magaalada City Island 4 Sim Town Village
Sagaal kale oo ku raaxeysata caan weyn dadka isticmaala nidaamka qalliinka Google. Waxa ciyaartan ka duwan ayaa ah inaan ku qasban nahay dhisno magaaladeena jasiiradda ah. Marka hawshani waxay leedahay dhibaatooyin dheeri ah oo dheeraad ah. Laakiin, haddii kale, kama fogayn ciyaaraha kale ee noocan ah. Shaki la'aan, xaqiiqda ah inay tahay jasiirad qalaad waxay siisaa taabasho aad u gaar ah.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kastoo gudaha aan ka helno wax iibsi iyo xayeysiis.
Magaalada Island Island 4 - Dhisme Magaalo: Dhisme Tuulo
Developer: Sparkling Society - Dhiso Cayaaraha Dhismaha Magaalada
Westbound: Cowboys Khatar Ranch!
Tani waa ciyaar aad u kala duwan. Sida waxaan ku xannibnay webi ka baxsan galbeedka. Marka waa inaan ka dhisnaa magaaladeena cusub meeshan. Markaa qaabka dhismaha iyo goobta ay gebi ahaanba ka duwan yihiin markan. Maxaa intaa ka badan, sidoo kale waa inaan raadino khasnadaha ciyaarta. Marka waxay leedahay hawlo dheeraad ah oo aad u xiiso badan. Adiguba waa inaad muuji sawiradaada, taas oo aad uga duwan kulamada kale ee liiska ku jira.
Soo degsashada ciyaartan dhismaha ee loogu talagalay Android waa bilaash. In kastoo gudaha aan ka helno wax iibsi iyo xayeysiis.
Developer: Isku-dhafan PopReach
Waxaan liiska ku xireynaa cinwaankan oo sidoo kale iska leh taxane caan ah. Doorka aan ku leenahay kiiskan waa in aan dhisno oo aan maamulno magaalo mustaqbal ah. Marka, ugu horreyntii, waxa ugu muuqda waa qaab dhismeedka iyo muuqaallada ciyaarta. Maaddaama ay si wanaagsan ugu dayanayaan maxaa noqon doona magaalo weyn oo mustaqbalka ah. Waxaan sidoo kale u soconaa inaan kulanno hawlgallo kala duwan oo ay tahay inaan fulino si aan horay ugu sii qaadno. Ujeeddada ugu weyn ayaa ah in magaalada ay horumar sameyso oo ay kobocdo.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo gudaha, sidii kiisaskii hore, waxaan ka helnaa wax iibsi iyo xayeysiis.
Developer: Ciyaar Classight Classics
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha dhismaha ee ugu wanaagsan Android
Yahoo ayaa joojin doonta taageerida barnaamijka 'Aviate launcher' bisha Maarso
Beddelka ugu wanaagsan ee Google Drive ee loogu talagalay Android